Ilhan Cumar oo xaalad laga walwalo ku tilmaantay maxaabiista arrimaha siyaasada ugu xiran Ethiopia | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Ilhan Cumar oo xaalad laga walwalo ku tilmaantay maxaabiista arrimaha siyaasada ugu...
Ilhan Cumar oo xaalad laga walwalo ku tilmaantay maxaabiista arrimaha siyaasada ugu xiran Ethiopia
Ilhaan Cumar oo ka tirsan gudida arimaha dibada ee Congress-ka Maraykanka ayaa warbixin ka soo saartay xiisadda siyaasadeed ee dalka Itoobiya haatan ka taagan.
Xildhibaanka ayaa ka mid ahayd xubno ka tirsan gudidaas oo dhawaan socdaal ku tagay dalka Itoobiya.
“Waxaan aad uga walaacsanahay xaaladda maxaabiista siyaasadeed ee Oromada ah ee uu ka midka yahay Bekele Gerba iyo hogaamiyeyaasha kale ee cunto joojinta ku jira. In loo diido in ay helaan daryeel caafimaad waxay xad gudub cad ku tahay xuquuqdooda aadanaha waxayna sii cakiraysaa xiisadda haatan Itoobiya ka taagan. Xukuumadda Itoobiya waa in ay maxaabiista ula dhaqantaa si waafaqsan hanaanka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee caddaaladda iyo in la ilaalinayo sharaftooda aadamenimo” ayay ku tidhi warbixin xafiiskeeda la soo baxday.
Waxa kale oo warbixintaa ay soo saartay xildhibaan Ilhaan Cumar ay kaga hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigray ee ay dagaalladu ka socdaan, waxaanay carrabka ku dhuftay in colaadda ka socota gobolkaasi dhalisay duruufo aadamenimo oo masiibo noqday oo ay sheegtay in sida qiyaasaha qaarkood tibaaxayaan ay boqolaal kun oo qof macaluul qarka u saaran yihiin.
“Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed waa inuu gargaarka aadamenimo marin u furaa, oo uu ogolaadaa in baarayeel madax banaaan oo xuquuqa aadanaha aqoon u lihi ay tagaan Tigray si aynu u ogaanno tirada dhabta ah ee gumaadka halkaa laga soo sheegay. Sidoo kale waa inuu qaadaa dhamaan xayiraadda isgaadhsiineed ee saaran oo uu hay’adaha aan dawliga ahayn iyo ururada xuquuqal insaanka u ogolaadaa in ay la xidhiidhaan shaqaalahooda gobolkaa jooga isla markaana u ogolaadaa dadka ku nool Tigray, oo kuwo badan oo dadka i soo doortay ahi ka mid yihiin, in ay qoysaskooda la xidhiidhaan” ayey tidhi Ilhaan oo dhaliilo u jeedisay xukuumadda Itoobiya.
Hase yeeshee warkaa ka soo baxay xafiiska Ilhaan Cumar waxa ka jawaabay danjiraha Itoobiya u fadhiya magaalada Washington ee dalka Maraykanka, Fitsum Arega, oo warqad uu toos ugu diray ku beeniyey arimahaa ay sheegtay.
Safiirku waxa kale oo uu u sheegay in uu diyaar u yahay inuu si fool ka fool ah ula kulmo qudheeda oo uu u faahfaahiyo goor alla goorta ay diyaarka u tahay xaaladda Itoobiya ka taagan ee ay ka hadashay.
Previous articleMadaxweyne Cali Guudlaawe oo la kulmay Madaxweynihi hore Shariif Sheekh Axmed
Next articleTurkiga oo bayaan kasoo saaray xaaladda adag ee Soomaaliya
Maxay tahay arrinta uga sii dari karto halista Covid-19 ee ka jirta garoonka Aadan Cadde?
Maalinta uu dhacayo dibad-baxaya ay ku heshiiyeen Rooble iyo Mucaaradka oo la shaaciyey